ओमकार टाइम्स होलीमा कोरोनाको डर : पानीमा नभिज्न र भिडभाडमा नजान डाक्टरको सुझाव – OMKARTIMES
काठमाण्डौ – कोरोना भाइरसको जोखिम बढेकाे भन्दै होलीमा रमाईलो गर्दा ध्यान दिन डाक्टरले सुझाव दिएका छन् ।
पानीमा भिज्दा तथा भिडभाडमा रङ‍्ग अबिर दल्दा विशेष ध्यान दिन टेकु अस्पतालका प्रवक्ता एवं सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप बाँस्तोलाको सुझाव छ ।
कोरोनाको भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन व्यक्ति आफैँ पनि सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । होली पर्वमा एक अर्कालाई अबिर र रङ्ग लगाउँदा वा पानी खेल्दा मानिस मानिसबीचको दूरी नजिक हुने हुँदा रुघोखोकी सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । यस्तै, हाछ्यूँ गर्दा थुक उछिटेर अरु व्यक्तिमा पनि सर्ने खतरा हुने डाक्टर बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।
रुसले बनायो दोस्रो कोरोना भ्याक्सिन: तेस्रो भ्याक्सिन डिसेम्बरमा स्वीकृत हुनसक्ने
यसरी चिन्न सकिन्छ रुघाखोकी र कोरोना – जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डे
सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघ्यो, के लकडाउन होला ?
कफी खाए हुन्छ धेरै फाइदा
दुई महिनामा ६९ जनालाई स्क्रबटाइफस र २४ जनालाई डेङ्गु